Numeri 20 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Miriyemu anofira kuKadheshi (1)
Mozisi anorova dombo uye anoita chivi (2-13)
Edhomu anorambidza Israeri kupfuura (14-21)
Kufa kwaAroni (22-29)
20 Mumwedzi wekutanga, ungano yese yevaIsraeri yakasvika kurenje reZini, uye vanhu vakatanga kugara muKadheshi.+ Ikoko ndiko kwakafira Miriyemu+ uye kwaakavigwa. 2 Zvino kwakanga kusina mvura yekuti ungano inwe,+ uye vanhu vakaunganira Mozisi naAroni. 3 Vanhu vaipopotera Mozisi,+ vachiti: “Dai takafa hedu pakafa hama dzedu pamberi paJehovha! 4 Makaunza ungano yaJehovha murenje rino kuti tifire muno nezvipfuwo zvedu here?+ 5 Makatibudisa muIjipiti kuti mutiunze munzvimbo ino yakaipa here?+ Haisi nzvimbo yembeu nemaonde nemazambiringa nemapomegraneti,* uye hapana mvura yekunwa.”+ 6 Mozisi naAroni vakabva vabva pamberi peungano vakaenda kusuo retende rekusanganira, vakapfugama, vakaisa misoro yavo pasi, uye kubwinya kwaJehovha kwakatanga kuratidzwa kwavari.+ 7 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: 8 “Tora tsvimbo, uunganidze ungano, iwe naAroni mukoma wako, mutaure nedombo pamberi pavo kuti ribudise mvura yaro, uye muchavabudisira mvura yekunwa padombo mopa ungano nezvipfuwo zvavo.”+ 9 Saka Mozisi akatora tsvimbo pamberi paJehovha,+ sezvaakanga amurayira. 10 Mozisi naAroni vakabva vaunganidza ungano pamberi pedombo, uye akati kwavari: “Chinzwai, imi vapanduki! Tokubudisirai mvura padombo iri here?”+ 11 Mozisi akabva asimudza ruoko rwake, akarova dombo racho kaviri netsvimbo yake, mvura zhinji ikatanga kubuda, ungano ikanwa pamwe chete nezvipfuwo zvavo.+ 12 Jehovha akazoti kuna Mozisi naAroni: “Hamuna kuva nekutenda mandiri uye kunditsvenesa vaIsraeri vachizviona, saka hamusi kuzopinza ungano iyi munyika yandichavapa.”+ 13 Iyi ndiyo mvura yeMeribha,*+ vaIsraeri pavakapopotera Jehovha, zvekuti iye akatsveneswa pakati pavo. 14 Mozisi akabva atuma nhume kubva kuKadheshi kuti dziende kuna mambo weEdhomu+ kunoti: “Zvanzi nemunin’ina wenyu Israeri,+ ‘Imi munonyatsoziva matambudziko ese atakasangana nawo. 15 Madzibaba edu akaenda kuIjipiti,+ uye takagara kuIjipiti makore* akawanda,+ uye vaIjipiti vakatibata zvisina kunaka pamwe nemadzibaba edu.+ 16 Takazochema kuna Jehovha,+ uye akatinzwa, akatuma ngirozi,+ ikatibudisa muIjipiti, uye tiri muno muKadheshi, guta riri kumuganhu wenyika yenyu. 17 Tinokumbirawo kupfuura nemunyika yenyu. Hatizopfuuri nemuminda yenyu yembesa neyemizambiringa, uye hatizonwi kana mvura yemumatsime. Tichafamba neMugwagwa Wamambo tisingatsaukiri kurudyi kana kuruboshwe kusvikira tapfuura munyika yenyu.’”+ 18 Asi Edhomu akati kwaari: “Hazviiti kuti upfuure nemunyika medu. Ukangopinda ndiri kuuya nebakatwa kuzosangana newe.” 19 VaIsraeri vakabva vati kwaari: “Tinoda kupfuura nemumugwagwa mukuru, uye kana isu nezvipfuwo zvedu tikanwa mvura yenyu, tinokuripai.+ Hatina chimwe chinhu chatiri kuda kunze kwekupfuura tichifamba netsoka.”+ 20 Asi akangoramba achiti: “Hamusi kuzopfuura.”+ Edhomu akabva abuda kuti asangane naye aine vanhu vakawanda kwazvo neuto rine simba.* 21 Saka Edhomu haana kubvumira Israeri kupfuura nemunyika yake; Israeri akatsauka hake akamusiya.+ 22 VaIsraeri, ungano yacho yese, vakasimuka kuKadheshi vakasvika kuGomo reHori.+ 23 Jehovha akabva ati kuna Mozisi naAroni vari muGomo reHori pedyo nemuganhu wenyika yeEdhomu: 24 “Aroni achaiswa kwakaiswa vanhu vekwake.*+ Haasi kuzopinda munyika yandichapa vaIsraeri, nekuti imi muri vaviri makapandukira murayiro wangu panyaya yemvura yeMeribha.+ 25 Tora Aroni nemwanakomana wake Eriyezari, ukwire navo muGomo reHori. 26 Bvisa Aroni nguo dzake,+ udzipfekedze Eriyezari+ mwanakomana wake, uye Aroni achafira imomo.” 27 Saka Mozisi akaita zvaakanga arayirwa naJehovha, uye vakakwira muGomo reHori ungano yese ichizviona. 28 Mozisi akabva abvisa Aroni nguo dzake, akadzipfekedza Eriyezari mwanakomana wake. Aroni akabva afira pamusoro pegomo ipapo.+ Uye Mozisi naEriyezari vakaburuka mugomo racho. 29 Ungano yese payakaona kuti Aroni akanga afa, imba yese yaIsraeri yakachema Aroni kwemazuva 30.+
^ Kureva kuti “Kupopotedzana.”
^ ChiHeb., “mazuva.”
^ Kana kuti “neruoko rune simba.”